यी १० खाद्यपदार्थले बढाउँछ स्मरण शक्ति
नेपाली पब्लिक शुक्रबार, भदौ ४, २०७८
मस्तिष्क मानव शरीरको एक महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील अङ्ग हो। मस्तिष्कले नै शरीरको सम्पूर्ण भागलाई नियन्त्रणमा राख्ने काम गर्छ। मानिसले गर्ने हरेक क्रियाकलापमा मस्तिष्कको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। मानिस सफल /असफल हुनका लागि सकारात्मक सोच हुनु जरुरी छ। त्यसका लागि स्मरण शक्ति बलियो हुनुपर्छ। स्वस्थ मस्तिष्कका लागि भोजनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
तपाईँले खानु भएको खानाले तपाईँको मस्तिष्कलाई स्वस्थ राख्न मद्दत पुर्‍याउँछ। जसले स्मृति र एकाग्रता जस्ता विशिष्ट मानसिक कार्यहरू सुधार गर्न सक्दछन्। स्मरण शक्ति ह्रास हुनबाट बचाउनको लागि स्वस्थ जीवनशैली हुनुपर्छ। यस्तै योग, ध्यान, प्राणायाम जस्ता विधिले पनि मस्तिष्कको कार्य सञ्चालनलाई सही राख्छ।
सामान्यता स्वास्थ्यकर, पोषिलो खानेकुरा सेवन गर्नुपर्छ। शरीरमा विकार पैदा गर्ने खानेकुराले स्मरण क्षमता कमजोर बनाउँछ। मदिराजन्य एवं तामसिक खानेकुराले स्मरण शक्ति नष्ट गर्छ । त्यसबाहेक अरू केही यस्ता खानेकुरा छन्, जसले स्मरण क्षमता बढाउँछ।
यी १० खाद्य पदार्थ जसले दिमाग बलियो बनाई स्मरण शक्ति बढाउन मदत गर्छ।
स्मरण शक्ति बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ फ्याट माछा। सामन, ट्राउट र सार्डिन जातका माछा महत्त्वपूर्ण ओमेगा ३ फ्याटी एसिडका स्रोत हुन्। तपाईँको मस्तिष्कको ६० प्रतिशत भाग बोसोले बनेको हुन्छ। जसको आधा भाग ओमेगा ३ हो। ओमेगा ३ ले मस्तिष्क र स्नायु कोशिका निर्माण गर्न मदत गर्छ। ओमेगा ३ स्मरण शक्ति बढाउन आवश्यक हुन्छ। ओमेगा ३ सँग दिमागका लागि चाहिने केही अन्य फाइदाहरू पनि छ।
ओमेगा ३ ले मानसिक गिरावट र अल्जाइमरबाट बचाउन मदत गर्छ। पर्याप्त ओमेगा नहुनुले सिकाइमा समस्या आउनु र डिप्रशन हुनु जस्ता समस्या निम्त्याउँछ । सामान्यतया माछाले सकारात्मक स्वास्थ्य लाभ पनि दिन्छ। समग्रमा बोसोयुक्त माछा दिमागका लागि एकदमै राम्रो मानिन्छ।
ठिक्क मात्रामा नियमित कफी पिउनाले स्मरण क्षमतामा सकारात्मक असर गर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। बिहानको कफी वा चियाले स्मरण तेज गर्छ। कफीको असर लामो समयसम्म रहने भएकोले दिमागलाई फुर्तिलो बनाउन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
एन्टीअक्सिडेन्ट तथा लाइकोपिनले भरपुर गोलभेँडाले मस्तिष्कको शक्ति बढाउँछ। फ्री रेडिकलले मस्तिष्कलाई हानी पु¥याउँछ ।द दैनिक गोलभेँडाको सेवनले फ्री रेडिकलको समस्या हटेर जान्छ। जुनसुकै ठाउँमा पाइने गोलभेँडालाई तरकारी, सलाद तथा अचारमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
मस्तिष्क आकारको ओखमा ओमेगा ३ फ्याटी एसिड अत्यधिक मात्रामा पाइन्छ। ओमेगा ३ का कारण मस्तिष्कमा सूचनाको आदानप्रदान राम्रोसँग हुन्छ। जसका कारण ओख्खर खानाले मस्तिष्क तेजिलो हुन्छ।
हल्दी र यसको सक्रिय कम्पाउन्ड कर्क्यूमिनसँग बलियो एन्टी–इन्फ्लेमेटरी र एन्टिऑक्सिडन्ट लाभहरू हुन्छन्, जसले मस्तिष्कलाई मद्दत गर्दछ। अनुसन्धानमा यसले डिप्रेसन र अल्जाइमर रोगका लक्षणहरूलाई कम गरेको छ।
६. ब्रोकोली : ब्रोकोलीमा धेरै यौगिक, शक्तिशाली एन्टिआक्सिडन्ट, एन्टी–इन्फ्लेमेटरी प्रभाव र भिटामिन के हुन्छन्। जसले मस्तिष्कलाई क्षति हुनबाट बचाउँछ।
७. ग्रिन टी : एन्टीअक्सिडेन्ट तत्वले भरपुर ग्रिन टीले सम्झना शक्ति बढाउन मद्दत गर्छ। यसमा पोलिफिनोल तत्त्व पाइन्छ, जसले स्मरण शक्ति अझै बढाउँछ। दैनिक दुई कप ग्रिन टी नियमित सेवनले स्मरण शक्ति बढाउन निकै मत गर्छ।
८. पालुङ्गो : पालुङ्गोमा पोटासियम हुन्छ । यसले मस्तिष्कको कोशिकामा राम्रो सम्पर्क बनाउँछ। साथै सोच्ने तथा याद राख्ने शक्ति बढाउँछ। पालुङ्गोमा एन्टीअक्सिडेन्ट बाहेक म्याग्नेसियम, फोलेट, भिटामिन ‘ई’ तथा भिटामिन ‘के’ पाइन्छ, जसले डिमेन्सिया हुनबाट जोगाउँछ। पालुङ्गोले स्मरण क्षमता बढाउनुका साथै क्याल्सियमको समेत राम्रो स्रोत हो।
९. बदाम : बदाममा भिटामिन ३ प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । यसले मस्तिष्कमा फाइदा पु¥याउँछ साथै स्मरण क्षमता बढाउन मद्दत गर्छ। एंटी-ऑक्सीडेंट र ट्रिप्टोफेन गुणले भर्पुर बदाम सेवनले गर्दा तनाव बाट पनि मुक्ति दिलाउन मद्दत पुर्याउछ। डिप्रेसन हुनबाट पनि बदामको सेवनले बचाउछ।
१०. अण्डा : अण्डा दिमागको स्वास्थ्यसँग जोडिएको धेरै पौष्टिक तत्त्वहरूको राम्रो स्रोत हो। अण्डामा भिटामिन बी, बी १२, फोलेट र कोलीन उपलब्ध हुन्छ। जसले मानसिक गिरावटलाई बचाउँछ। स्मरण शक्ति बलियो बनाउँछ। फालेट र भिटामिन बी १२ ले डिप्रेसनबाट बचाउँछ। फोलेटले डिमेन्सियाबाट बचाउँछ । भिटामिन बी र कोलीनले मस्तिष्कको विकासका सार्थ मुडलाई नियमित गर्न मदत गर्छ।
#स्मरण #शक्ति #मस्तिष्क #खाद्यपदार्थ #भोजन
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ ४, २०७८ ०६:५६